Madaxda dowlada oo cambaareeyey qarax dad badan ku dhinteen oo dhacay Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyey qarax Ismiidaamin ah oo shalay galab ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarrunta gobolka Baay, kaasoo uu fuliyey nin watay gaari miino lagu soo raray.
Qaraxa gaari oo lagu bartilmaameedsanayey gduoomiyihii hore ee gobolka Baay C/fataax Geesey ayaa sababay dhimashada 13 qof oo uu ku jiro ninkii qaraxa fuliyey, waxaana ku dhaawacmay ilaa 20 kale.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay kazoo laabtay safar uu ku tegay dalka Uganda ayaa ka tacsiyeyey qaraxii ka dhacay Baydhabo.
“Waxaan rabaa inaan halkaan uga tacsiyeyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ehelladdii qarabadii dadkii ku dhintay qaraxii cadawgu ka geystay Baydhabo, Allah u naxariisto inta dhimatay kuwa dhaawaca ahna Allah ha caafiyo” ayuu yiri madaxweyne Xasan.
“Dowladda Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan ayey gar-gaar caafimaad ugu fidin doontaa dadka dhaawaca ah. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo shacabka Soomaaliyeed cadawgu waa kaas ummadda dhibaatadda la daba taagan ee sida naxariis daradda ah kula dhaqmaya, aan u midowno oo aan dhinac uga soo wada jeesano” ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Raysulwasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed ayaa dhankiisa cambaareeyey weerarkaasi dhiiga badan ku daatay, wuxuuna yiri “Waxaan dhaleeceeynayaa kuwa arxanka daran ee dhiigga Muslimiinta ku daadinaya fikrado gurracan oo shareecada ka baxsan. Arxan uma hayaan dadkeenna iyo dalkeenna waxaanan sii wadeeynaa dagaalka aan kula jirno nabad-diidkan dadka ku dhex jira illaa aan ka dhammeeyno dalkeena.”
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa dhankiisa ka hadlay weerarka qarax ah, wuxuuna yiri “Anigoo ku hadlaya magaceyga, magaca Gudoonka Baarlamaanka iyo Xildhibaannada Golaha Shacabka waxaan halkaan tacsi uga dirayaa shacabka reer Baydhabo aniga oo uga tacsiyadeynaya falkii argigixisanimo ee lagu dhibaateeyey shacab aan waxba galabsan, sidoo kalena waxaan Alle ka baryayaa in inta ku dhaawacntay uu Alle caafimaad siiyo”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Prof. Jawaari ayaa ugu baaqay shacabka, ciidammada Qalabka Soomaaliyeed iyo Ciidammada AMISOM iney iska kaashadaan sugidda amnigooda si loo hor istaago falalka noocaan ah ee lagu daadinayo dhiiga shacabka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan.
Mas’uulka weerarkaan lala beegsaday oo ah C/fataax Geesey, horayna u ahaan jiray gudoomiyaha Baay, iminkana ka tirsan maamulka muranku ka jiro ee 6-da gobol ayaa sheegay inuu ka badbaaday qarax Alshabaab doonayeen iney isaga ku khaarijiyaan.
“Alle mahad leh, qaraxu wuxuu ahaa mid fuleynimo ah, waan ka bad baaday, waxaa u tacsiyadeynaya dadkii ku dhintay ee gacanta xaqdarada ay dishay”ayuu yiri C/fataax Geesey.
C/fataax Geesey oo ka hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaa yiri “”Dhimashada waa tobaneeyo ruux, qaar ka mid ah ilaaladeyda ayaa ku dhimatay, kuwo kalena waa ku dhaawacmeen, gaariga NOAH ayuu ahaa oo nin naftii halige ah ayaa waday, meesha ayaa aniga ku sugnaa”.
Kenyan aircraft crashes at Somali border